Vetivety ny atiny, maharitra sy matoky ary tsy mivadika | Martech Zone
Ny herinandro vitsivitsy lasa izay dia tany ivelan'ny tanàna aho ary tsy afaka nanokana fotoana betsaka hanoratana atiny toy ny mahazatra ahy. Tsy nandroaka lahatsoratra antsasaky ny boriky aho, fantatro fa vanim-potoana fialantsasatra ho an'ny mpamaky maro ahy koa ary nisafidy ny tsy hanoratra isan'andro fotsiny aho. Taorian'ny nanoratako nandritra ny folo taona dia izany no zavatra mahalasa adala ahy - ny manoratra dia ampahany fotsiny amin'ny maha-izy ahy fa tsy izay ataoko fotsiny.
Betsaka ny olona sahirana amin'ny manoratra atiny. Ny sasany manana olana amin'ny fandavorariana ny teniny, ny hafa kosa manana fotoan-tsarotra mieritreritra izay hosoratany, ary ny sasany kosa tsy mankasitraka azy fotsiny. Nanjary fitempon'ny fon'ny ankamaroan'ny ezaky ny varotra an-tserasera ny atiny… ary mety ho fanamby tokoa ny fihazonana izany.
Mampalahelo fa ny fahalalana ny atiny lehibe no làlana hananganana orinasany - misy ny olona mangalatra azy fotsiny. Ary toa lasa mihabetsaka izao.
Mark Schaeffer vao haingana no nanoratra tao amin'ny Facebook:
Rehefa avy nilentika tato amin'ity tontolo nomerika ity nandritra ny taona maro aho dia tapa-kevitra fa ny plagiarism dia lalam-piasana ara-dalàna. Na ny sasany amin'ireo "guru" ambony indrindra aza dia nanangana ny marika amam-panafarana haloto. Toa tsy misy mahatsikaritra na tsy miraharaha. Ampy ny porofo nanangona hanambara fa izany fomba azo iainana izany hahombiazana. Indraindray aho dia mila mikintona ny tenako hahafantatra fa tena misy ity tontolo ity ary tsy misy dikany firy ny etika na ny fisainana kritika.
Ity ny teoria-ko. Taona maro lasa izay ny olona izay tsy dia nahay loatra dia mbola afaka niroborobo tamin'ny asa aman-draharaha tamin'ny alàlan'ny fifandraisana sy ny politika. Ao amin'ny tranonkala, tsy misy miasa na iray aza. Ka raha te hiaina dia mila mangalatra ny atiny sy ny hevitry ny hafa izy ireo mba hisehoana manam-pahefana sy manan-tsaina. Midadasika tokoa ny Internet ary goavambe tokoa ny churn ka afaka miasa mandritra ny fotoana maharitra ny fanaovana sandoka, na dia fantatry ny olona sasany aza izany. Ity no maodely fandraharahana vaovao.
Steve Woodruff nanamarika tamim-panesoana ihany koa:
Ny geeks atiny / varotra dia miresaka momba ny haino aman-jery Paid, Owned and Earned. Tsy miraharaha ny haino aman-jery Borrowed, Hijacked, and Disgraced ny rehetra. Mihevitra aho fa mety hisy ny fandraharahana eto…
Vao tsy ela akory izay, tadidiko ihany koa Tom Webster mampiseho ny toerana nanalan'ny olona ny sary famantarana ny orinasany avy amin'ny tabilao nozaraina rehefa nizara izany tamin'ny Internet izy ireo.
Raha efa ela ianao no namaky ity bilaogy ity dia ho hitanao fa izaho zarao ny atin'ny olon-kafa atiny iray taonina. Mikolokolo ny atiny saika isan'andro aho - avy amin'ny vala, avy amin'ny namana, ary avy amin'ny infografika sy fampisehoana. Miverina mivantana any amin'ny tranonkalany aho, manonona ny anarany ao anaty atiny (toy ny nataoko tery ambony) ary manosika ny mpihaino ahy hitady ireo loharanom-pahalalana hafa ireo.
Manome lanja ny atiny ny mpihaino ahy… na tsy loharanon'izany atiny izany aho na inona na inona. Raha ny marina dia mino aho fa mampiditra azy ireo amina manam-pahaizana momba ny indostria, marika, vokatra ary serivisy maro izay nitombo bebe kokoa tamin'ny mpamaky ahy ny fahatokisako sy ny fahefako.
Ary tsy ny sandan'ny hafatra entiko amin'izy ireo fotsiny ho anao fa ny fanajana sy ny firaiketam-po ao anatin'ny orinasa no mamaly dividend amiko. Betsaka ny olona no mihevitra ny mpiara-miasa aminy ho toy ny fifaninanana nefa tokony hojereny ho mpanolo-tsaina, mpampianatra, loharano ary naman'izy ireo mihitsy aza.
Inoako fa ny fanomezana doka ho an'ny hevitry ny olon-kafa dia tsy marina ny zavatra tokony hatao, manome ny mpamaky anao ihany koa ny fahatsapana hoe iza ianao amin'ny maha olona anao. Ity atiny izay eritreretinao mindrana na hangalarana mivantana ity dia vetivety ihany… fa ny fahamendrehanao sy ny fiheveranao ny hafa dia hijanona elaela kokoa aminao.
Raha vantany vao very fahatokisana olona iray ianao, dia tsy azo atao mihitsy ny mamerina azy io. Saika isan'andro dia mahazo fangatahana hampiasa ny atiny novokariko aho - ny sasany amin'ny boky, amin'ny afisy, amin'ny whitepapers, sns. Tsy nandà mihitsy aho rehefa nanontaniana ary tsy mbola nitory na iza na iza hanao izany. Feno fankasitrahana aho fa tonga amin'ny mpihaino vaovao sy malalaka kokoa. Ary saika isan-kerinandro dia mahita ny atiny ato amin'ireo tranonkala mangalatra azy aho ary manao izay rehetra azoko atao hanakanana azy ireo. Tsy hanao raharaham-barotra na hanampy an'ireo olona ireo aho….
Ka… amin'ny manaraka dia mijanona ianao ary mitady mindrana ny atiny na koa ireo hevitra na foto-kevitra niasan'ny olon-kafa noforonina, fa zarao ary omeo ny sain'ny mpamorona! Ho gaga ianao amin'ny fomba fiasa, ny fahatsapana tsara sy ny fanajana sy ny dera azonao avy amin'ny namanao.
Ary tsy mila sorona ny fahamendrehanao vao mahavita azy.
Tags: Content Marketingmivadikamarika schaeffermangalatra atinysteve Woodrufftom webster
Dec 8, 2014 amin'ny 11: 47 AM
Amin'ny maha mpanoratra ahy dia azoko antoka fa manana voambolana be dia be ianao hisafidianana. Ho liana kokoa amin'ny zavatra holazainao aho raha mandatsaka slang ratsy toy ny "Half-Ass." Fantatro fa nanjary slang mahazatra ho an'ny fiezahana antsasaky ny faran'izay kely kalitao, saingy hitako fa manafintohina izany.
Ilay teny namboarinao indray dia misy teny ratsy. Tsy izany no tadiaviko amin'ny mailaka fandraharahana.
Mirary fety sambatra,
Dec 8, 2014 ao amin'ny 9: PM PM
Manan-jo ho sosotra ianao ary mety hisoratra anarana raha sitrakao, fa tsy hanitsy ny lingo-ko aho atsy ho atsy. Tsy hitako mihitsy ilay hoe vetaveta.